I-Apple iPhone Tall Video Commo Spoof
NgoLwesihlanu, Septhemba 21, 2012 NgoLwesihlanu, Septhemba 21, 2012 U-Adam Encane
KungoLwesihlanu nesikhathi sobuhle! Ngijabulela ngempela i-spoof enhle nothando lapho ihloselwe inkampani efana ne-Apple (engingumlandeli wayo ngokuphelele). Ukuphelela komkhiqizo kuletha nethuba lokuhlekwa usulu… futhi le vidiyo ivela ku- Isiyaluyalu kuyipikili! Yize umqondo wesigingci umuhle impela 🙂
Encwadini eseceleni, i-iOS6 iphumile futhi sibone ezinye izici ezinhle impela. Ngibone nezimbungulu ezimbalwa. Isibonelo esisodwa ukuthi ngangishayela ucingo namhlanje ekuseni futhi i-alamu yami yakhala… ngingaqiniseki ukuthi lokho kusebenze ngendlela efanayo enguqulweni yokugcina kodwa bekucasula kancane.
Kunezinhlelo zokusebenza ezimbalwa ezinobunzima obuthile ngezinye izimbungulu. Ngicabanga ukuthi bobabili i-Apple nabathuthukisi besoftware banesibopho lapho. I-Apple igcina intambo eqinile ezungeze inqubo yayo yokufaka isicelo ukuqinisekisa ikhwalithi. Kokunye ukuzidela ngenkululeko abasebenzisi be-Apple abahweba ngakho ukuze kuzuze ukuzinza. Kubukeka sengathi abenzanga nhlobo ukuhlolwa kwezicelo ezikhona ukuqinisekisa ukuthi zisebenza ngokuphelele, noma kunjalo.
Futhi abathuthukisi bohlelo lokusebenza babe nethuba lokulanda i-iOS6 futhi bahlole ngokuphelele izinhlelo zabo ngaphambi kokukhishwa, ngakho-ke yihlazo kubo kwezinye izici ezingasebenzi. Angikaziboni izingqinamba ezinkulu… izingqinamba nje ezincane zokuzulazula nezokubuyela emuva.
PS: Ngibonga uBen McCann ku Ukubonisana NgeCatalist ngokwabelana ngalokhu okutholakele!
Sep 22, 2013 ku-1: 10 AM
hilarious ... kodwa "fanboy" phezulu lapho. Iqiniso lokuthi ungu-fanboy likhombisa ukungaqondi ngokuphelele ubuchwepheshe, ukumaketha kanye ne-hypnosis. i-apula isebenzisa imali eningi engenayo ekukhangiseni ehlose amaqembu abantu abanokwethenjelwa abafuna ukufakwa wen kuziwa kubuchwepheshe, kepha banamakhono alinganiselwe obuchwepheshe, basikisela kalula futhi bathanda ukuphupha. Akukho lutho olungahambi kahle ngokuphupha, kepha ngokusebenzisa i-hypnosis kuzikhangiso, i-apula lakha imilayezo efihliwe ejabulisa abathandi bezobuchwepheshe, ibaxhumanise nomqondo wokuphupha / ukwehluka futhi ekugcineni baxhumanise nophawu lwe-apula. Vele abantu bazothi lokhu akwenzeki, kepha kulula ukukwenza lokho uma kunezinto ezenzekayo ezingaphansi kwezinga labo lokwazi. Ngaphezu kwalokho, i-apula yakha izikhangiso zalo ukwenza abasebenzisi bacabange ukuthi bathola ukuthuthuka okuphezulu kakhulu kwezobuchwepheshe kanti empeleni kuvame ukuba yisidala, i-hardware yakudala abayithola ishibhile, futhi bayithengise ngamanani aphezulu. I-imac iyisibonelo esiphelele. I-Apple ekubeni "umqambi" kufanele ngentengo ka- $ 2000 inikeze kuphela okwakamuva nje kwi-hardware yelungelo labo le-imac? Kubi, esikhundleni salokho ngenkathi i-PC ine-core i7 cishe iminyaka emibili, i-apula ibisathumela ama-lousy core2duo cpu kumakhasimende angalindele.
Ngakho-ke, lapho ngithi anginabo ubuchwepheshe obuthile njengoba bekholelwa ukuthi bayikho. Futhi lokho kuyanuka impela, ngoba amakhasimende we-mac anesisekelo esikhulu sabantu abakholelwa ukuthi ukuhlela ividiyo kulezi kungcono kakhulu. Kepha kungahlala ama-40 noma ama-50% isikhathi eside ukunikela noma yini nge-imac engu- $ 2000 kunalokho obekuzoyenza ku- $ 700 pc egijima windows. Abantu abaqinisekile bazothi, "windoze, omg, windows movie maker", kepha ngemuva kokuthi ugcine imali engu- $ 1300 kwi-pc, ukuthenga uhlelo lokuhlela ividiyo olungu- $ 80 kuya ku- $ 150 akusilo uhlelo. NOMA ukuyithola mahhala kuwebhu. Kepha iningi lama-fanboys lingama-fanboys ngenxa yezinkulumo ezikhohlisayo ezinikezwa nguJob ngesikhathi semihlangano yamagama ayisihluthulelo. Ukungasho ukuthi kukhona okungenani izinto ezimbalwa ezipholile nemibono nempumelelo, kepha konke engikubukayo kufihle amanga kukho, ihaba nokunye. Kuhlala kuyifomula efanayo. Imisebenzi kuma-jean, ukubamba ngekhanda isixuku, NOMA izikhangiso ze-a-mac ezinamafutha omuntu oyi-PC nomuntu omncane ukuba yi-mac, ukuhlekisa nge-pc njll. Imisebenzi inamakhulu amavidiyo lapho ekhohlisa ngokukhohlisa futhi. Kokunye okudala uyavuma ukuthi konke kumayelana nokumaketha, futhi uthi wayeguqula indlela yamateki yeNike yokuthengisa ama-macs. Ungakhulumi ngama-mips noma i-megahertz, khuluma nje ngekusasa, nabantu abafeze izinto ezinkulu, njengo-Einstein, njll. KwaNike basebenzise nje uMichael Jordon no-shazam, ukuthengisa okuphindwe kane. Kimi, i-apula futhi liwumbumbulu njalo, ikakhulukazi kumakhompyutha wabo wedeskithophu.
Sep 22, 2013 ku-2: 57 AM
I-Hypnosis? Ngempela? Ngabe lokho akuphikisani nombono wakho wokuthi abayona i-tech savvy?
Futhi angikwazi ukuthola izincazelo zakho zithembekile ekuphenduleni okufanayo nokuphambene onakho kimi. Kusobala impela ukuthi awuyithandi i-Apple futhi awuyisebenzisi imikhiqizo. Empeleni ngisebenzise zombili iMicrosoft neApple. Eqinisweni ngisenayo iPC enhle kakhulu ekhaya. Kepha iMac yami iyashesha, inokwethenjelwa futhi yinhle. Futhi kubangani bami abathenge i-PC engama- $ 700 oyichazayo, badlule ezintweni ezi-3 ezicwebezelayo zepulasitiki ngasikhathi sinye lapho ngithole iMac Book Pro yami eyodwa.
O .. ne-iOS7 iyesabeka! 🙂 Zijabulise ngokufuna inkinobho yakho yokuqala… ingabe ibuyile okwamanje?